US inobvumirana kusimudzira mitero yesimbi uye aluminium neCanada neMexico - TELES RELAY
HOME » pasi rose United States inobvumirana kusimudza mitero pamusoro pesimbi uye aluminium neCanada neMexico
Mutungamiri weUnited States Donald Trump akakwidza chigumbuso chinokosha kubvumirano kwechibvumirano chekusununguka kwekutengeserana pakati penyika nhatu.
Nyika ine AFP Yakatumirwa nhasi pa 21h37
Nguva yeku Kuverenga 1 min.
Mutungamiri Donald Trump, pakati, pakati peMutungamiri weMexico Anrique Peña Nieto (kuruboshwe) uye Gurukota reCanada Justin Trudeau, pakusayina kwechibvumirano chitsva chekutengeserana pakati peUnited States, Mexico neCanada (AEUMC), pamusoro peG20 muBuenos Aires, Argentina, November 30. MARTIN MEJIA / AP
Mutungamiri weUnited States Donald Trump akazivisa musi weChishanu, 17 May, kubviswa kwesimbi uye aluminium tariffs neCanada neMexico, kubvisa chikonzero chakakosha kugadziriswa kweHurumende yeHurumende. pakati penyika nhatu. "Tangobva taita chibvumirano neKanada neMexico uye tichazotengesa zvigadzirwa zvedu munyika idzodzo tisingaiti mimwe mitero yakawanda kana kuti mitero"akadaro muridzi we White House.
Nguva pfupi yapfuura, sangano rekubatana neUnited States neCanada rakazivisa chibvumirano chekusimudza mitero yakagadzirirwa neWashington kwemakore anenge gore, kupera kwemwedzi yekutengesana kwebhizimisi.
Mukuda kwayo kunzwirwa tsitsi "America kutanga", Donald Trump akanga asarudza vashandi vake vekutengeserana muzhizha 2017, kudzokororwazve kweNorth American Free Trade Agreement (Alena) ari kushanda kubvira 1994, achimupomera mhosva yekuparadza zviuru zvemabhizimisi mabasa kunyanya mumutokari yemotokari nekuda kwekutsvaga muMexico. Kuomanikidza maoko evakaroorana navo, White House yakanga yaisa 1er June 2018, mamwe maitirwo esimbi uye aluminium.
Washington, Ottawa, neMexico City dzakanga dzapera chibvumirano chitsva chekutengeserana (AEUMC) neChNUMX september mushure mekumhanya kwemwedzi gumi nemitatu yekukurukurirana kwekutengesa kwakaoma. Zvadaro nyika nhatu dzakanga dzasayina chimiro chaNovember 30.
Kubvira ipapo, mashoko acho achiri kutarisira kugadziriswa munyika dzose nhatu, neOttawa ichisimudza mitero yeUnited States sezvinodiwa kuti ugovapa kuenda-mberi.
Chirevo chakachengetwa kune vatinyoresa Verenga zvakare Sangano rekuAmerica rekutengeserana, chinetso chitsva chekudzokorora zvakare kweAlena
"Nhanho huru mberi"
Washington-Ottawa chibvumirano chekusimudza mitero yeCanada steel uye aluminium "Nhanho huru" kuti kugadziriswa kwechibvumirano chitsva, akagamuchira Chishanu musi mukuru weCanada, Justin Trudeau. "Iyi mitero yesimbi uye aluminium ndiyo yakakonzera kubvumirana kwatiri uye neUnited States yezvinoenderana neAlena"akadaro mutungamiri wepepanhau reHamilton, Ontario. "Ichokwadi kuti takangotora danho guru" kune iri ratification, iyo inogona kuitika "Mumavhiki anotevera"akawedzera.
Kunyanya, chibvumirano chitsva chinopa kuchinja kukuru mune izvo zvinonzi mitemo yepakutanga yemotokari, zvichida kutenga zvakawanda zvezvinhu zvakagadzirwa ne US uye zvikamu. Inosanganisirawo gwaro rinotsanangurira Mexico kuti riwedzere vashandi vemagetsi.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/05/17/les-etats-unis-acceptent-de-lever-les-tarifs-douaniers-sur-l-acier-et-l-aluminium-avec-le-canada-et-le-mexique_5463686_3234.html?xtmc=etats_unis&xtcr=2